अस्ट्रेलियामा किन हुदैछ यस्तो प्राकृतिक विपत्ति? फेरि आगो दन्किएपछि राजधानीसहित कयौं स्थान खाली गरिदै… – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > अस्ट्रेलियामा किन हुदैछ यस्तो प्राकृतिक विपत्ति? फेरि आगो दन्किएपछि राजधानीसहित कयौं स्थान खाली गरिदै…
admin January 22, 2020 अन्तराष्ट्रिय, प्रवास	0
अस्ट्रलियाको राजधानी केनबराको एअरपोर्टको नजिकै रहेको जंगलमा आगो सल्किएपछि शहरका केही स्थान खाली गराइएको छ ।शहर नजिकै लागेको आगोका कारण आवागमन रोकिएको छ । अधिकारीहरूले आगलागी भएका नजिकका क्षेत्रलाई खाली गर्न र प्रभावित क्षेत्रभन्दा टाढै रहन भनेका छन् । अस्ट्रेलियामा केही दिन अघि परेको पानी र तापमानमा आउको गिरावटका कारण आगलागी नियन्त्रणमा केही सफलता मिलेको थियो ।
तर, तीव्र हावा र फेरि तापमान बढ्नाले बुधबार फेरि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ । सामाजिक संजालमा राखिएका तस्वीरमा राजधानीका उपनगरीय क्षेत्रमाथि धुवाँको मुस्लो फैलिएको देखिएको छ । हालैका दिनमा केनबरा, सिड्नी र मेलबर्न विश्वमा सबभन्दा प्रदूषित शहरमध्येका भएका छन्।गत सेप्टेम्बरदेखि शुरु भएको आगलागीबाट अहिलेसम्म २९ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । २५ सय घर पूर्णरुपमा नष्ट भएका छन् ।
अस्ट्रेलियाका जंगलहरूमा लागेको आगोको असर बुधबार प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षणमा देखाइएको छ । सर्वेक्षणमा खर्च कटौतीको विषय ल्याइएको छ ।प्राकृतिक विपत्तिबाट विश्वकै १४ औं ठूलो अर्थ व्यवस्थामा दबाब परेको देखिएको छ । सर्वेमा डिसेम्बरदेखि मार्चसम्मको तीन महीनामा घरेलु उत्पादनमा ०.२५ अंकको कमी आउनसक्ने आकलन गरिएको छ ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेलले अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगै सेना पनि आउने बताएका छन् । पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले नयाँ बानेश्वरमा राखेको सी चिनफिङ भाग–१ र २ पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा नेता पोखरेलले एमसीसी सँगै अमेरिकी सेना नेपाल आउने बताए ।
उनले भने, “एमसीसी परियोजनाको सुरक्षाका नाममा नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ, त्यसैले मैले विरोध गरेको हुँ ।” अमेरिकी दूतावासले केही दिन अगाडि सार्वजनिक गरेको दश तथ्यले एमसीसी सँग जोडिएको प्रश्नको जवाफ नदिएको उनले बताए । इण्डो प्यासेफिक रणनीति अन्तर्गत एमसीसी नभएको भन्दै दूतावासले दश तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । “यति ठूलो परियोजना सञ्चालनका लागि डीपीआर किन छैन ?” पोखरेलले भने, “डीपीआर बिना चल्ने परियोजनाको रहष्य छ ।
”उनले चीन सरकारले अगाडि बढाएको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स् (बीआरआई) को असफल बनाउन एमसीसी आएको नेता पोखरेलले बताए । चीनबाट ल्याउन लागिएको रेलका लागि भइरहेको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई प्रभावमा पार्नेगरी ट्रान्समिसन लाइनको कार्यक्रम ल्याउनुको कारण अमेरिकाले नखुलाएको उनको भनाइ छ ।
रेल ल्याउन नदिनकै लागि एमसीसीमा सर्तहरु अमेरिकाले तेस्र्याएको पोखरेलको भनाइ छ । “एमसीसी संसदबाट पारित हुने तर, संशोधन संसदले गर्न नपर्ने प्रावधान राखिनु, एमसीसी सँग जोडिएका विषयमा फौजदारी अभियोग नलाग्ने र परियोजना अमेरिकाले चाहे तोड्न सक्ने व्यवस्थाले देशको सार्वभौमता रहँदैन”, पोखरेलले भने ।